ညောင်ချောင်းသာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Posts Tagged "ညောင်ချောင်းသာ"	31
WordPress.org	Who Will Be The Next President?	Aung San Suu Kyi Received 100% of the votes of 51 millions Myanmar peoples! ( 2/2/16)
Comments By Postကြွားတာပါ - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E)အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ - ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) - သင့်အေးရိပ်" မပိတ်စကောင်း ပိတ်စကောင်း " - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - kaiလျှပ်တပြက် ပန်းခြံ။ - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E)" အဝင် အထွက် " - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - ကိုပေါက်(မန္တလေး)" ဆုံမှတ် လမ်းခွဲ " - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E)ငနုငယ်...နင်ယောက်ျား မဟုတ်သလော...။ - naywoon ni - black chaw" ဟိုဟို ဒီဒီ " - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - kaiကံကောင်းသူများ - kai - လုံမလေးမွန်မွန်ဟပ္ပီးနယူးရာ ၂၀၁၆ – Happy New Year 2016 –3- အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - kaiပုံပြင်အသစ်တွေ မကြားဖူးတဲ့ ကောင်လေး - kai - မောင်ဘလိူင်Congress - သင့်အေးရိပ် - ဦးကြောင်ကြီးနေ့စွဲများ - သင့်အေးရိပ် - သျှားသက်မာန်လဲရေး မလဲရေး သရဲမွေး No Deal - မင်း ခန့် ကျော် - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်ရန်သူမီးကို အိမ်တိုင်းသတိပြုပါ။ - padonmar - Swal Taw Ywetဒီမိုကရေစီ ခရီးကြမ်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - သင့်အေးရိပ် - ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E)အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၆ - kai - သင့်အေးရိပ်Aung Zay Min	Western Union	Category	Arts & Humanities
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10Anzartone (95264 Kyats )kyeemite (88553 Kyats )weiwei (82660 Kyats )alinsett (77567 Kyats )SP (76140 Kyats )padonmar (73843 Kyats )blackchaw (73597 Kyats )Foreign Resident (57831 Kyats )Northern Onestar (56676 Kyats )shwemanthar (55821 Kyats )FB	FB
Singapore Liquor delivery